Madzimai tadzoserwa shure’ | Kwayedza
23 Nov, 2021 - 08:11 2021-11-23T08:46:00+00:00 2021-11-23T08:38:51+00:00 0 Views
SANGANO reWomen’s Coalition of Zimbabwe (WCoZ) rinoti kunyuka kwedenda reCovid-19 kwakadzosera shure budiriro yevanhukadzi, kusanganisira nyaya dzezvematongerwe enyika.
Vachitaura nguva pfupi yadarika pamusangano wakarongwa neWCoZ, Mai Nyasha Sengayi – avo vanova campaign strategist wesangano reSource International Zimbabwe – vanoti madzimai vachiri kusarira mune zvematongerwe enyika.
Vanoti kuuya kwakaita chirwere cheCovid-19 kwakawedzera kudzosera vanhukadzi kumashure sezvo veruzhinji vange vasingatenderwe kufamba zvichitevera zvirongwa zvinosanganisira lockdown senzira yekudzivirira kupararira kwedenda iri.
“Covid-19 yakanganisa madzimai nekuti vange vasiri kukwanisa kubuda vachienda kunosangana nevanhu vachiita hurukuro maringe nezvematongerwo enyika,” vanodaro Mai Sengayi.
Vanotenda matanho ari kutorwa neHurumende ekudzivirira kupararira kweCovid-19 anosanganisira kubaiwa kuri kuitwa veruzhinji majekiseni ekudzivirira chirwere ichi izvo zvaona vanhukadzi vachiwana mukana wekusangana nevanhu apo Zimbabwe iri kugadzirira sarudzo dza2023.
“Kuuya kwakaita chirongwa chekubaya vanhu nhomba dzeCovid-19 idanho rakanaka nekuti izvi zvichabatsira madzimai kuti vakwanise kubuda vachisangana neveruzhinji vachikurukura nevanhu, vachiita gadziriro dzavo dzesarudzo dzichauya,” vanodaro.
Zvichakadai, Mai Sengayi vanoti zvakakoshawo kuti vatapi venhau vanyore nhau dzinosimudzira vanhukadzi kuti vaonekwe sevanhu vanogona kupinda mune zvematongerwo enyika uye kutungamira sezvinongoitwa nevanhurume.
“Kurudziro yedu kuona madzimai achinyorwa nhau dzavo dzinovaka kwete kungovadzikisira pasi chete. Madzimai kazhinji nyaya dzavo hadzitaurwe sezvadziri. Saka tinoda kuona vachisimudzirwa, nhau dzavo dzichitaurwa sezvadziri.
“Kune madzimai vari kuita mabasa akanaka anoyemurika, izvi ndizvo tinotarisira kuti zviburitswewo uye tichivakurudzira kuti vapinde mune zvematongewo enyika,” vanodaro Mai Sengayi.